Gobolada News Agency » DHAGEYSO Mahad Abiib oo baaq u diray mas`uuliyiinta dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed.
DHAGEYSO Mahad Abiib oo baaq u diray mas`uuliyiinta dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa todobaadkani warbahinta Norwey si aad ah u hadal hayeen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Mahad Abib Mohamuud kaasoo lagala laabtay dhalashadii dalka Norwey uu ku lahaa, kadib markii lagu eedeeyey in uu ka been sheegay halka uu asal ahaan kasoo jeedo.
Mahad Abiib ayaa wadanka Norwey yimid xili uu 14 jir ahaa, isla markaana ka bilaabay waxbarashadiisii Dugsiyada Hoose/Dhexe, Sare ilaa iyo heer jaamacadeed, isagoo waqtigan ka shaqeeya isbitaal ku yaala magaalada Oslo ee Dalka Norwey.
“Waxaa ayaan daro ah in jiritaankeyga meel looga dhaco iyadoo la igu mar-marsiyoonayo in aanan Soomaali aheyn, waxaan keenay warqad cadeyneyso Soomaalinimadeyda iyo in Aabahey oo ka mid ahaa wasaaradii Gaashandhiga ee Soomaaliya” ayuu jiri Mahad Abiib oo lahadlayay shabakada gobolada.com xarunteeda magaalada Oslo ee Dalka Norwey.
21-ka February ayaa lagu wadaa in maxkamada go’aan ka gaarto kiiska lagu heesto muwaadinkan Soomaaliyeed oo iminka aanan heysan wax sharci ah, wuxuuna ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan xukuumada inay u hiiliyaan oo igarab istaagaan Mahad Abiib.
Si kastaba Soomaalida Dalka Norwey ayey cabsi iyo walaac soo wajahday maadaama dowlada Norwey ay bilowday dabagal Fecbook-yada iyo waliba halka ay lacagaha u diraan.